Dr. Faroole ?hala fududeeyo dhismaha maamulada dalka iyo hir-gelinta federaalka?(Dhegaysi+sawirro) – Radio Daljir
Dr. Faroole ?hala fududeeyo dhismaha maamulada dalka iyo hir-gelinta federaalka?(Dhegaysi+sawirro)
Seteembar 17, 2013 6:13 b 0
Brussels, September 17, 2013 – Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) ayaa khudbad dheer ka jeediyey shirkii Hiigsiga cusub ee Soomaaliya ?New Deal?, kaas oo 1.8 Bilyan oo Uero loogu yaboohay Soomaaliya, iyadoo la balan-qaaday in la taageero dalka.
Khudbada madaxweynaha oo ahayd mid dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxaa qeyb ka ah arrimaha federaalka iyo dhismaha maamulada dalka oo madaxweynuhu ku baaqay in fududeeyo, sidoo kale waxaa uu sheegay in uu la shaqayn doono dowladda dhexe.
?Waxaan diyaar u ahay markasta in aan la shaqeeyo Madaxweyne Xasan sheikh, dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dalka ka jira, si la isaga kaashado sidii dib loogu soo celin lahaa Qarankii Soomaaliyeed ee qayb-qaybsamay? ayuu yiri Madaxweyne Faroole.
Waxaa uu sheegay madaxweyne Faroole in loo baahan yahay in la sameeyo heshiis siyaasadeed oo ku mudaysan 18 bilood si loo dedejiyo dhismaha maamul gobolleedyada, dhamaystirka Dastuurka iyo in dalka oo idil laga dhaqan geliyo nidaamka federaalka, waxaa uu sheegay in Soomaaliya ay haatan joogto xiligii la yeelan lahaa hal u jeedo.
Madaxweyne Faroole khudbada uu ka jeediyey Brussels, sidoo kale waxaa uu ku daray in aan la xayirin xawaaladaha lacagta ee debeda, taas oo uu sheegay in ay caqabad ku tahay nolosha Soomaali fara badan oo jooga gudaha iyo gobolka Barriga Afrika.
?Waxaan doonayaa in aan xusuusiyo ka qeyb-galayaasha shirkan in Puntland in kastoo ay taageersan tahay sharci ahaanshaha isdhaafka lacagaha iyadoo kor lagala soconayo, lagana hortegayo khataraha dhinaca amaanka, waxaan haddana usoo jeedinayaa dunida oo dhan in aysan joojin nidaamka xawilaadaha lacagta, kaas oo lagama maarmaan u ah nolsha Malaayiin Soomaali ah, qaar waxay ku jiraan xeryaha Qaxootiga,halka kuwa kalena ay yihiin arday wax ka barta dunida? ayuu yiri Madaxweynaha Puntland Faroole.
DHEGEYSO: war-bixin uu ka diyaariyey Maxamed Salaad Xaaji Dirir oo daljir ka tirsan
Buuhoodle oo laga sameeyey olole nadaafadeed ( Sawiro)
Madaxweynaha Xasan sheikh oo safaro uu ku tegayo ilaa USA ay maanta uga bilowdeen Talyaaniga